Mai Chibwe VekwaZimuto: Hasha, ganyabvu, sipidhi zvinobvepi pabasa iri
Ko seiko tichiona kutipamwe murume anoda kurhoja zvine hasha mukati kuita sokuti haasi mumba make kana kuti nguva yokuita ishoma, asi ipapo muri mumbba mennyu uye hapana chokumhanyira? Mu PSYCHOLOGY yevarume uye yemhuka dzakawanda, unoona kuti rume ddzinoda kukasira kupedza kuita sokuti pane kutyya kuti hadzii dzingangotiza kana kuti dzimwe rume ddinouya kuzobvonyonga zviitiko. Kuvanhu zvinohi ukaona murume ava kuma 30 chakuti akunyenga iwe ukamuda ukazoti maroorana oti akavata newe oita 2 minutes, ziva kutimunhu ange ajaira kuita rhoji yokuba saka haadi kunonoka. Sokuti munhu anonorhojana nomunhu muimba isrii yake, kana mumakwenzi anoda kukasira kuti akasire kubuda mumba iyi vanhu vasawana achirimo.
Kana ukaona une murume akadai anoita miniti imwe chete kana mbiri, iwe ndiwe unotofanira kumudzidzisa kuti zvinobhowa zvakadii. Kana wazvipira kumudzidzisa, chitanga nokumurega achipinza. achingoti pindei iwe chiwana mukana wekumukoira kaviri chete wobva wasimuka womuudza kuti wanakigwa uye watopedza. Ukadaro kaviri achagumbuka zvokuti. iwe chimuudza kuti ngaazvipedzise nemaoko sezvaunoitawo iwe mazuva ese. Chimugarisa pasi umuudze kuti ndizvo zvaanokuita mazuva ese uye unogumbukaw sezvaaita saka yoitwa sei nyaya.
Kozotizve vanhu mukutaura kwedu tinoshandisa mavara ehashha kkana tichitaura nyaya yerhoji. Uyezvee tinoita sokutivakadzi ma VICTIM erhoji varume ndivo varidzii verhoji.
Chero ukaenda kunyika ipi zvayo ukaterera mataurire anoita varume nemavara avanoshandisa, unoona kuti mufungwa dzavo vanofunga kuti ndivo vanoita zvinhu kuvakadzi. Vakadzi vanoitwa chete. Kashoma kuhwa murume achitaura kuti iye nomukadzi wake vakaita ichi kana icho pamwe chete. Maonere evarume mukadzi anoitwa nomurume. Iye zvokuti mukadzi anenge achiitei ipapo hazvina basa.
Ipapa ndipo panobva kusava nehanya nokuti mukadzi anakigwawo here kana kwete. Kunongohi chero ini ndamukwira chete ndizvo zvine basa. Kuti udzidzise murume kuti abve pamafungire iwawo zvinotora nguva nokuti anenge asingatomboni kuti uri kuzama kumuudza chii chacho.
Varume vashoma vanooona sokuti kuvatana chinhu chine runako (beautiful thing) chokuti ukasapa umwe zvakanaka chinokanganisika. Hakuna murume ane mavara ane rukudzo okutaura nyaya yokuvatana. akawana ndeekushora chete. chero muchirungu.
Shaft her, screw her, fu** her, give her one, do her, hit it, give her a beef injection, bob her, pock her, flagpole her, humb her.
what kind of words are these to ddescribe such a beeautiful activity?
Tererai anomukadzi wake vakakumbira uti tinovayananisa isu ndokuendako. Tiri pakudya ini ndokutanga nyaya yacho kuti dambudziko riri papi. Murume ndokutanga kutaura kuti mukadzi wake ane zvese zvaanoda asi anongokomburena chete kuti hazvina kukwana. Pakubvunzwa kuti zvaanazvo zvacho zviiko, kwahi imba anayo, mwana ndakamuzvarisa, ndinomukwira 5-7 times pavhiki, mari ndinomupa even iye achishanda achitambirawo yake.
Tobvunzawo mukadzi kuti koiwe sei uchikomburena iwe uchiwana zvese izvi. Muadzi oti zvese anazvo asi anodawo murume anoziva kuti ane maNEEDS pakunovata.
Ava vanhu vaviri vasingatombohwisisani kuti chii chiri kuitika. Murume anoona sokuti mukadzi anonetsa uye haatendi asi zvese zvinodiwa zviripo. Pamwe anotudza shamwari dzake kubasa kuti vakadzi havahwisisiki, kwahi chero ukamupa zvese anongokunetsa chete.
Mukadziwo anotoshamisika kuti murume uyu pakutaurirana anti anomuda asi pazviito anoita seasingambofungi nezvake, inyaya yei? Nyaya iri pamaonero anoita varume kana vachitarisa vakadzi. Murume achitarisa mukadzi haaoni munhu mukuru ane fungwa uyeanofunga zvinhu zvakafanana nezvaanofunga iye. Anongoona munhu akamutakurira chitubu, matinji, mazamu, magaro, zvinhu zvokuti iye agotambisa paadira, uya nyakutakura asinei nezviri kuitika.
Maonere awa ndiwo anoitisa kuti uwane varume vanoti akabvisigwa bhurugwa nomukadzi akawana mukadzi akanyorova, unoona omhanya paInternet kunopopota ipapo kwahi mukadzi uyu haanaki nokuti ange ari mvura yega yega. Dai ange asina kunyorova akagwadziwa paanopinzwa chombo, waiihwa murume wacho oti akanakigwa nazvo.
Kuva mhunhu akanyorova kwaita kuti mukadzi anakigwevo iuye asagwadziwa asi murume haazvidi izvozvo, nokuti mukadzi anofanira kungonakira murume iye asinei nazvo.
Ukaenda kunyika dzokumusoro kweAfrica, unowana vakadzi vakachekwa bhinzi vari vana vadiki, zvadaro chitubu chosonwa kuti chivharike kungosara kaburi kadikidiki kokuenda kumwedzi nako. Mukadzi akadai paanokura owanikwa, murume wacho ndipo paanotogwinyirira kupinza ipapo pasingakwani chombo. Pedzezvo ozviroova dundundu kwahi ndanakigwa nomukadzi. Ipapo mukadzi ange ane misodzi nguva yese.
Mafungire evarume panyaya yevakadzi anotoshamisa. Unoona murume mumba achiita sokuti ndiCommander wehondo kana achitaura nomukadzi wake. Unobva waona kuti mukadzi haana VALUE kumurume wake.
Kana uchida kupokana nomurume wako nokukasira, muitire zvaanokuitira iwe. Uchaona kuti zvinokasira kumubhowa. Musi waanoda iye iwe ukamuudza kuti hausi kuda, inoita nyaya huru zvokuti unokwanisa kugariswa dare. Makamiririra kuenda kudare anokubata ganyabvu iota zvaanoda. Ukaita nharo anokudza kuti muchato wapera nokuti hauna kuraigwa natete vako.
Asi iwe musi waunoda iye asingadi hakuna dare raunokwanisa kuenda ukanogarisa. Anotokuseka kwahi unoda kuiswa kupfuura hure. Asi ipapo akakurira mumhuri inpinda chechi woshaya kuti zvechihure akazvionera kupi.
Mukadzi waKoni paaimboshanda 93 hours per week kuti mhuri iwanewo mari yerent neyechikafu, aiti paanosvika kumba anowana murume agere zvake achiona TV, pane kuti dai achifilla maform ekutsvaka basa. Zvadaro pakunovata kwahi rega ndikukwire. Vaipopotedzana mukadzi ichiti akaneta murume asingahwisisi. Akazoti amuwanirawo basa ku CARE home kwake ndokumuendesa kuTRAINNG ndokupiwawo ake maShift, mukadzi aiti akati ngatidai murume oramba.
Varume vakawanda vanofunga kuti AUTHORITY yavo inobva pakuti ane chombo. Kana wamupa CHALLENGE pamafungire ake azvoreva kuti wapa CHALLENGE kuchombo chake saka anofanira kukukaurisa nokukuyeuchidza kuuti urume mumb ndeupi, zvoreva kukurjja chero uchida chero usingadi. Unohwamunhu ava kukuudza kuti akabhadhara roora, AS if wanga usingazvizivi, isi iwe waitoripo paaibhadhara pacho. Ndiwe wakatoudza tete kuti vaudze hama kuti deredzai roora ndiende.
Hakuna mukadzi asingazivi kuti murume wak ane chombo. Asi chobomumba ngachinakire tese tiri vaviri. Iniwo ndine change chandinogonawo kukuyeuchidza kuti ndinacho. Ndinokwanisawo kungoita chikomba sezvaunogonaw kuita hure.
AUTHORITY yemurume anotoipiwa nomukadzi wake. Kwahi shamwari ndodawo uite murume wangu ugorhojana neni, tigoita vana vedu, tigere zvakanaka. Authority iri mufungwa dzemukadzi kwete muchombo chomurume. Iwe murume ukaona mukadzi wako oisa CHALLENGE, zviri nani kugarisa mukadzi wako pasi wobvunza kuti zvaita sei Mai Chimwana, motaurirana.
Rhoja mukadzi wako une fungwa yokutimuri kuita zvinhu zvamunoda mese uye mese munofanira kuguta.
Gara nomukadzi wako mumba une fungwa yokuti munhu mukuru ane fungwa inoshanda seyako. Zvehasha handizvo zvinovaka. Kana asingadi rhoji, rega avate.
Kana akuti pinza ita zvaareva asi terera zvaanoda utore nguva muchiita.
Imbopawo AUTHORITY yezvekurhojana mumba kumukadzi wako aitewo mambokadzi mumba make. Iye ndiye achadzosa kwauri mofara mese.
Zveganyabvu nehasha nokukasirira mukadzi, zvinobva pa PRIMITIVE instinct dzevarume dziri muropa. Iwe somurume akadzidza, fadza mukadzi wako.
Posted by Mai E Chibwe at 16:21